'Zvese zvaakataura zvese manyepo': Nyanzvi yeTikTok Tayler Holder anopindura kupomero dzakaitwa neaimbova musikana Sommer Ray - Pop-Tsika
'Zvese zvaakataura zvese manyepo': Nyanzvi yeTikTok Tayler Holder anopindura kupomero dzakaitwa neaimbova musikana Sommer Ray
Musi waJune 8th, Tayler Holder akaputsa runyararo rwake muvhidhiyo achitaura mutambo waive wakakomberedza Sommer Ray naKaylun Slevin. Tik Tok nyeredzi Holder naRay vakadanana, vachienda uye vadzima, kwemwedzi mitatu mipfupi. Nekudaro, ivo vakazvidaidza zviri pamutemo kuti zvinopera pakati pa2020.
Verenga zvakare: Christine Sodelko anodaidzira Gabbie Hanna kunyepa zvekufambidzana nemunin'ina waTaylor Swift; vateveri vanomuti 'murevi wenhema'
Tayler Holder uye Sommer Ray Drama Inoitika
Mutambo uyu wakatanga naRay achionekwa pane Amai Pasi Podcast kutsanangura zvikamu zvehukama hwavo izvo zvisati zvamboonekwa. Sommer akataura kuti Tayler achiri kuda kuve nechekuita uye akabata mukomana wake, Jack Gilinsky.
Ray akawedzera kuti iyi yaive panguva yehukama hwaHolder naCharly Jordan. Tayler akaramba zvese zvinotaurwa paaionekwa paBFF's Podcast.
Mineti muPodcast, mushure mekukumbirwa pfupiso yaSommer Ray, Holder akati:
Ndinoedza kuve mukomana akanaka nguva dzese uye [senge] handidi kuisa vanhu pakuputika. Haisi izvo zvandinoedza kuita, zvachose. Asi, [senge], chaizvo zvese zvaakataura paMabhangi uye Keem podcast zvese zvaive nhema.
Holder akaenderera mberi achitsanangura kuti hukama hwaive 'hwakanyanya-huturu.' Akaenderera akawedzera kuti Ray aizoparadzana naye nguva zhinji panguva yehukama hwese.
Ndichangobva pafoni nayo @TaylerHolder achidziya pamusoro @SommerRay uchienderera mberi iye @momsbasement Tayler anoti anoda kuuya svondo rinouya kuzopa divi rake! https://t.co/Lz6oQvObGX
- KEEM (@KEEMSTAR) Chivabvu 27, 2021
Verenga zvakare: Jake Paul anoti Logan Paul akarova Floyd Mayweather, anokurumidza kutsikwa
Tayler anotsanangura chiitiko kumafaro akaitirwa nemumwe anopesvedzera Jake Paul. Anotaura kuti zvaisanganisira Kaylyn Slevin, mumwe weakare Tayler. Holder anoti Ray akaona kupindirana kwacho ndokutanga kumutuka munzvimbo yekupaka pamberi pevamwe shamwari. Holder akaenderera mberi achiti Ray akamudzivirira pane ese masocial media nezve chiitiko ichi.
Nguva dzese dzatairambana, aindivharira ipapo ipapo.
Tayler akataura zvakare kuti mutambo uyu waive wakakurumbira paTikTok futi. Ray's back-and-forth ichivharira Holder kwakatungamira mukufungidzira kwakasiyana pamusoro pekurambana kwavo.
iyo @TaylerHolder hurukuro. manheru ano kuma8 pm est pane yedu youtube pic.twitter.com/r3q2yr4XsY
- BFFs naDave Portnoy naJosh Richards (@BFFsPod) Chikumi 8, 2021
Verenga zvakare: Nei Liam Payne naMaya Henry vakarambana? Kutsanangura hukama hwavo semuimbi kunovhura nezve kupindwa muropa
Tayler akataura nezveaimbova shamwari yake, Jack Gilinsky, waakaedza kudzoreredza kukurudzira chinzvimbo. Holder akati aive padyo naGilinsky kusvikira vhidhiyo yaonekwa. Muvhidhiyo yakataurwa, Gilinsky anoonekwa naRay mushure mekurambana kwavo, achitsakatika muimba yekurara.
Tayler anoti akaedza kubata Gilinsky nezve mamiriro ezvinhu asi haana kumbowana mhinduro. Bvunzurudzo yakapedzisa naTayler akataura kuti aida kuwirirana naRay, asi hazvina kudzorerwa. Anofuridzira akataura kuti iye naRay vanga vasina kuonana.
Verenga zvakare: 'Ini ndiri f * cking ndaneta nenhepfenyuro': Logan Paul anopindura kukamba inotyaira inopesana naye uye mukoma Jake Paul
Batsira Sportskeeda kuvandudza kufukidzwa kwayo kwepop tsika nhau. Tora ongororo yemaminetsi matatu ikozvino.
jamie watson uye jamie mapfumo
rega kupa vamwe mhosva yekukanganisa kwako
hombe john studd vs andre hofori
kutaura sei kuti haasi mukati mako
zvekuita kana iwe wakwira